किन रोकियो हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टबीचको मर्जर प्रक्रिया ? « Sansar News
किन रोकियो हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टबीचको मर्जर प्रक्रिया ?
३० पुष २०७८, शुक्रबार १५:५५
काठमाडौं । चर्चामा रहेको हिमालय र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया रोकिएको छ । हिमालयन बैंकको शुक्रबार बसेको वार्षिक साधारणसभाले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रस्ताव अस्वीकृत गरेसँगै मर्जर प्रक्रिया रोकिएको हो ।
बैंक मर्जरसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पास गर्न ७५ प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ तर, करिब ४० प्रतिशत सेयर हिस्सा ओगटेको संस्थापक सेयरधनीहरू नै मर्जरको विपक्षमा मत हालेका छन् ।
हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डमान श्रेष्ठ पक्षका सेयरधनी र कर्मचारी संचय कोषले विपक्षमा भोट हालेपछि मर्जर विफल भएको बताइएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठका पक्षका सेयर धनी र कर्मचारी संचय कोषले विपक्षमा भोट हालेपछि मर्जरमा जान चाहेका सेयर धनीबीच भनाभनसमेत भएको थियो ।
हिमालयन बैंकमा झन्डै १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा भएको कर्मचारी संचय कोषले पुनः डीडीए गर्नुपर्ने माग अगाडी सारेपछि मर्जर प्रकृया विवादमा फसेको थियाे। हिमालयन बैंकमा संचय कोषको १४.८५ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ । विभिन्न ६ वटा प्रश्नको समाधान बिना अहिलेकै अवस्थामा मर्जरमा जान नहुने पक्षमा कोष उभिएको छ ।
बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठ र कर्मचारी संचय कोषले हालकै अवस्थामा मर्जरमा गर्दा हिमालयन बैंकका सेयरधनीलाई प्रति कित्ता २२ रुपैयाँ नोक्सानी हुने आधार देखाउँदै मर्जरको विपक्षमा मत दिएका छन् ।